Okwu Nzuzo Nke Oria #1
Okwu Nzuzo Nke Oria #2
Okwu Nzuzo Nke Oria #3
Okwu Nzuzo Nke Oria #4
Okwu Nzuzo Nke Oria #5
Okwu Nzuzo Nke Oria #6
Nzuzo Agha Nzuzo
Akwụkwọ Nzuzo Agha
Cold War edemede edemede
Ọkọ akụkọ ihe mere eme
Nleta ebe nchekwa Cold War - ihe omume 1945 ruo 1950
Nleta ebe nchekwa Cold War - ihe omume 1950 ruo 1959
Nleta ebe nchekwa Cold War - ihe omume 1960-1979
Nleta ebe nchekwa Cold War - ihe omume 1980 ruo 1991
Nzuzo banyere ebe nchekwa agha - otutu
Oku banyere ebe nchekwa Cold - ndi isi
Nzuzo banyere ebe nchekwa Cold - okwu na echiche (I)
Nzuzo banyere ihe banyere Cold War - isiokwu na echiche (II)
Ebe nchekwa Cold War quizzes
Oge Nzuzo War fim na TV
Ajụjụ Cold War #1
Ajụjụ Cold War #2
Ajụjụ Cold War #3
Ajụjụ Cold War #4
Ajụjụ Cold War #5
Ajụjụ Cold War #6
Ajụjụ Cold War #7
Ajụjụ Cold War #8
Nkwupụta Oge Nzuzo
Isiokwu Ndị Agha Nzuzo
Oyi Nzuzo bu onye
Okwu Nkwupụta Okwu Nzuzo - echiche
Okwu Nnukwu Okwu Agha - ihe omume
Okwu Okwu Nzuzo - otutu
Okwu Okwu Nzuzo - ndi mmadu
Okwu Nzuzo Agha Nzuzo - ebe
Esemokwu Okwu Nzuzo
Agha Nzuzo bụ ogologo oge nke esemokwu mba ụwa na esemokwu dị n'etiti 1945 na 1991. Amalitere oke mgba n'etiti United States, Soviet Union na ndị ha na ha jikọrọ aka.
Onye edemede bụ George Orwell dere nkebi ahịrịokwu 'oyi agha', onye na October 1945 buru amụma banyere “nkwụsi ike jọgburu onwe ya” ebe mba ndị dị ike ma ọ bụ njikọta jikọrọ ọnụ, nke ọ bụla nwere ike ibibi nke ọzọ, jụrụ ịkọ ma ọ bụ kpaa nkata.
Amụma siri ike nke Orwell malitere ịpụta na 1945. Dị ka Europe napụtara n'aka ọchịchị Nazi, ndị agha Red Red nke ọwụwa anyanwụ ya na ndị America na ndị Britain nọ n'ebe ọdịda anyanwụ. Na nnọkọ iji chọpụta ọdịnihu agha Europe, esemokwu bilitere n'etiti onye isi Soviet Joseph Stalin na ndị otu ya na ndị America na ndị Britain.
Ka ọ na-etiti etiti 1945, atụmanya nke njikọ aka agha mgbe agha n'etiti Soviet Union na mba ndị ọdịda anyanwụ adaala. N'ebe ọwụwa anyanwụ Europe, ndị nnọchi anya Soviet kpaliri ndị nnọchi anya ọchịchị ike, na-akpali ndọrọ ndọrọ ọchịchị Britain Winston Churchill ịdọ aka ná ntị nke “Ckwà mgbochi Iron”Na-agbadata na Europe. United States zara site na mmejuputa iwu a Atụmatụ Marshall, ngwugwu enyemaka $ 13 ijeri anọ iji weghachi gọọmentị na akụ na ụba Europe. Ka ọ na-erule ngwụsị 1940, enyemaka Soviet na enyemaka ndị Western ekewasị Europe n'etiti abụọ.
Maapụ na-egosi nkewa nke Europe n'oge Agha Nzuzo
Ọ bụ na ntọala nke nkewa a post-agha Germany, ugbu a rapaara n'akụkụ abụọ na isi obodo ya bụ Berlin nke ike anọ dị iche iche.
Na 1948, Soviet na East German nwara ike ndi Western ike site na Berlin ndị ikuku kasị ukwuu n’akụkọ ihe mere eme mebiri. Na 1961 gọọmentị nke East Germany, na-eche ihu a Ọpụpụ nke ndị yamechibidoro ya ma guzobe ihe mgbochi n'ime obodo nkewa nke Berlin. Na Ogige Berlin, dị ka a maara ya, ghọrọ akara na-adịgide adịgide nke Agha Nzuzo.
Esemokwu Agha Nzuzo gbasaa gafere ókèala Europe. N’ọnwa Ọktọba 1949, mgbanwe nke ndị China bịara na mmeri nke Mao Zedong na otu ndị Kọmunist China. China rụrụ ọrụ ngwa ngwa wee bụrụ ikike nuklia, ebe iyi egwu nke komunizim kpaliri mmasị ndị mmadụ na-atụ Agha War Cold na Asia. Na 1962, nchọpụta nke Gọọmentị Soviet na-agba na agwaetiti nke Cuba mere ka United States na Soviet Union merie agha nuklia.
Ihe omume ndị a mere ka enweghị atụ nke enweghị ntụkwasị obi, ntụkwasị obi, ịtụ ụjọ na nzuzo. Ndị ụlọ ọrụ dịka Central Intelligence Agency (CIA) na Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) mụbara ha izochi eme gburugburu ụwa, na-achịkọta ozi gbasara steeti ndị iro na ndị ọchịchị. Ha tinyekwara aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ndị ọzọ, na-agba ume ma na-eweta mbugharị n'okpuruala, ọgba aghara, ọgbụgba egbe na nnọchi anya agha.
Nkịtị ndị mmadụ nwetara ahụ Agha Nzuzo na oge dị adị, site na otu n'ime ọzụzụ kpụ ọkụ n'ọnụ okwu nduhie n’akụkọ ihe mere eme nke mmadụ. Nzuzo Agha Nzuzo na ngwongwo nuklia metụtara akụkụ nile nke ọdịbendị a ma ama, gụnyere ihe nkiri, televishọn na music.
Weebụsaịtị nke Alpha History's Cold War bụ akwụkwọ ọgụgụ zuru oke maka akwụkwọ ọgụgụ maka ọmụmụ ihe ndọrọndọrọ ọchịchị na nke agha n'etiti 1945 na 1991. O nwere ihe dika 400 isi mmalite na nke ozo di iche, tinyere ihe omuma nchịkọta edemede, akwụkwọ, nghazi, okuko na biographies. Studentsmụ akwụkwọ toro eto nwere ike ịchọta ozi gbasara Agha Nzuzo akụkọ ihe mere eme na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme. Studentsmụ akwụkwọ nwekwara ike nwalee ihe ha maara ma cheta ọtụtụ ihe dị n'ịntanetị, gụnyere nyocha, ntụgharị okwu na okwu. Isi mmalite, edepụtara ihe niile dị na akụkọ Alfa site n’aka ndị nkuzi ruru eru ma nweekwa ahụmahụ, ndị ode akwụkwọ na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme.
Ihe nkiri & TV
Ebe a na-alụ Agha Nzuzo nwere isiokwu, isi mmalite na echiche banyere ihe omume ụwa na esemokwu dị n'etiti 1945 na 1991. Emere saịtị a site na Alfa History ma nwee okwu 308,862 na ibe 405. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na anyị FAQ page or Usoro ojiji.